Martsa 2016, Manamarika Ny Fotoam-panovàna Sy Hatezerana Ho An’ny Fahitalavitra Japone · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2016 2:38 GMT
Kishii, Tahara, Torigoe, Otani & Aoki: “mpanao gazety Japone miteny amim-pahasahiana “ Dikasary avy amin'ny YouTube-n'ny FCCJ.
Milaza amim-pahasahiana ny momba ny resaka izay lazainy fa ezaka ataon'ny governemanta mba hamerana ny fahalalahan'ny mpanao gazety ny vondron'ny fahitalavitra Japone
Tamin'ny Alakamisy faha 24 Martsa, nandray anjara tamina valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety sy adihevitra taminà latabatra boribory tao amin'ny fikambanan'ny vahiny mifandray amin'i Japana tany Tokyo ireo dimy malaza mpanao fandaharana amin'ny fahitalavitra, Kishii Shigetada (News 23, TBS), Tahara Sochiro Tahara (TV Alahadinà tetikasa Asahi), Torigoe Shuntaro ( mpanao fandaharana menavazana sady sisanà homamiadana ), Kanehira Shigenori (TBS), Otani Akihiro ( mpanao gazety mahaleotena ao aminà fahitalavitra) ary Aoki Osamu (mpanao gazety sady mpanao fanadihadiana aminà fahitalavitra)
Azo jerena eto ilay valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, miaraka amin'ny fanazavana amin'ny teny Anglisy.
“Azon'ny governemanta baikoana ny fahitalavitra mba hampiato ny fandaharana raha toa ka heverina fa mitanila ara-politika ny fandaharana alefany” io fanambarana nataon'ny Minisitry ny atitany sady Minisitry ny Serasera, Takaichi Sanae, tao amin'ny parlemanta Japoney tamin'ny Febroary io no nanaitra azy ireo.
Avoitran'ireo Japoney mpanao gazety ny teritery ataon'ny governemanta amin'ny haino aman-jery.
Nambaran'i David McNeill, mpanao gazety iray izay mandrakotra an'i Japana amin'ny anaran'ny Irish Times, ny Independent ary ny The Economist fa ny fanehoankevitr'i Takaichi no nahatonga ny tahotra momba izay ” toa miendrika fanafihana maharitra ataon'ny governemanta amin'ireo haino aman-jery mijanona ho mpitsikera ao amin'ny firenena”.
Efa ela ny gazety vahiny any Japana no nanao ny vovonan-dresaka ho an'ny daholobe mba hanamoràna ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny tontolon'ny haino aman-jery Japoney, isan'izany ny FCCJ.
Ohatra, Japone iray mpampiasa Twitter no namerina nibitsika indray ny sariitatr'i David Simonds izay niseho tao amin'ny the Economist ary dia niparitaka nanerana ny haino aman-jery sosialy izany :
Milaza marina ny tantaran'ny governemanta Abe ity, sa tsy izany ?
Hita mipetraka amin'ny seza fiandrianana ao andamosin'ireo haino aman-jery i Abe, Praiminisitra Japone, ao amin'ilay sariitatra.
Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny FCCJ ny faha-24 Martsa dia nahakasika ny fanamarihan'ny Minisitra Takaichi ankoatry ny fahitàna nhy fitontongan'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Japàna.
Efa niteny nanohitra ilay fanamarihan'ny minisitry ny serasera ny vondron'ireo dimy mpanao gazety :
[Vakin'ny peta-drindrina ] “TEZITRA AHO ! Mifanohitra amin'ny hevitry ny lalàm-panorenana Japone sy ny lalàna mifehy ny fandefasana fandaharana ny fanamarihan'ny Minisitra Takaichi momba ny fampiatoana ny asan'ny mpandefa fandaharana .
Vao mainka mandrehitra ny afo, raha ny hevitro…
Taona vitsivitsy lasa izay, nisy ny tsaho fa hoe teren'ny governemanta Abe ny haino aman-jery nasionaly Japone mba hampangina ny tsikera sy hanàla ireo olo-malaza sahisahy miten amin'ireo fahitalavitra.
Taorian'ny nitsikeran'ilay mpanao gazety menavazan'ny Mainchi News sady mpanadihady tao amin'ny TBS, Kishii Shigedata, ny lalàna mampisavoritaka momba ny filaminana nataon'ny governemanta Abe tamin'ny taona lasa, ny mpandàla ny fomban-drazana dia naka dokambarotra tao amin'ny gazety mba hiampangana an'i Kishii ho manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny fandefasana fandaharana. Nilaza i Kishii fa hametra-pialàna amin'ny asany amin'ny maha- mpanao fandihadiana azy amin'ny fandaharana News 23 -n'ny TBS, saingy mbola hanohy hitsikera ny politikan'ny governemanta.
Nametra-pialàna ny volana aprily ihany koa i Furutachi Ichiro mpanolotra vaovaon'ny TV Asahi sady olo-malazan'ny fahitalavitra Japone noho ny tsaho fitsabahana ara-politika. Nanolotra ny vaovao amin'ny alin'ny Hodo Station tao amin'ny Fahitalavitra Asahi nandritra ny 12 taona i Furutachi.
Tsy resy tsy miady i Furutachi, mpanao fanadihadiana amina fahitalavitra, be resaka sady tsy manaiky lembenana, izay fantatra tsara noho ny hatsaràn'ny fanolorany, maro loko sy misy fahalalàna.
Nasian'i Furutachi tamin'ny balan'ny fisarahana ny Minisitra Takaichi tamin'ny ampahan'ny fandaharana News Station (報道ステーション, Hodo Station) farany nataony :
Manantena aho fa mbola hamely an'i Takachi Sanae ihany ny News Station rahampitso alina !
Raha ny marina, nampitahain'i Furutachi tamin'i Hitler i Abe ary tamin'ny Repoblikan'i Weimar i Japana tamin'ny fisehoany farany.
Niaiky ampahibemaso ny hanitsy ny lalàm-panorenan'ny “fandriam-pahalemana” taorian'ny ady samy irery ny Praiministra Abe raha toa ka mahatratra ny maro an'isa ambongadiny ao amin'ny Parlemantera ny governemantany amin'ny fifidianana hatao amin'ny lohataona 2016.
Ianaro ny lesona momba ny Repoblikan'i Weimar ary fantaro ny loza ateraky ny fanavaozana ny lalàm-panorenan'i Japana ! Izany no tifitra farany nataon'i Furutachi talohan'ny nialàny tamin'ny onjan'ny fahitalavitra.
[Fanazavana ilay lahatsary, ambony havanana ] Ahoana no fomba nahaterahan'ny jadona ? [Ambany] Tsy misy làlana hafa hizorana.
Hijanona ao anatn'ny tantara ho toy ny sangan'asan'i Furutachi Ichro izany !
Manamarika ny fotoanan'ny fiovàna eo amin'ny fandefasana fahitalavitra Japone ny Martsa 2016. Kuniya Hiroko, mpanolotra fandaharana be mpijery dia voatery niala ihany koa tamin'ny fanolorany ilay fandaharana efa naharitra ela Close-Up Gendai tamin'iny volana iny.
Mampalahelo : fanolorana farany ny Close-up Gendai, iray amin'ireo fandaharana mba misy kalitao kelin'ny fahitalavitra Japoney, miaraka amin'ny mpanolotra fandaharana tena tsara Hiroko Kuniya
Noheverina ho toy ny fandaharam-baovao tsara indrindra tany Japana efa hatry ny ela ny Close-up Gendai izay arahana isan-kariva amin'ny fahitalavim-panjakana NHK.
Nanapa-kevitra ny hitondra ny fandaharana amin'ny làlan-kafa miaraka amin'ny fialàn'i Kuniya ny NHK .
Taorian'ny kapoka mafy nanosehana an'i Hiroko Kuniya dia nolefahan'ny @nhk ny “Closeup Gendai.”
15 ora izayFilipina